DHAGEYSO Gadiidka qaar oo laga mamnuucay magaalada Baydhabo. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Gadiidka qaar oo laga mamnuucay magaalada Baydhabo.
Anwar Mohamed October 16, 2018
Kadib weerarkii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa magaaladaasi laga mamnuucay inay ka dhex shaqeeyaan gawaarida NOAH-da iyo mootooyinka Bajaajta, sida lagu sheegay amar ka soo baxay taliska booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ujeedka loo hakiyay shaqada gaadiidkaan ayaa saraakiisha ammaanka ee magaaladu ku sheegeen inay tahay macluumaadk dhanka amaanka ah oo sheegaya in baabuurta NOAH-da iyo mootooyinka lagu tuhunsan yahay inay qaraxyo u adeegsanayaan Ururka Al Shabaab,gaadiidka ay qaraxyo saaran yihiina ay magaalada ku jiraan.
Taliyaha ciidamada booliska gobolka Baay General Mahad C/raxmaan Aadan ayaa sheegay in maalmaha gaadiidkaas shaqooyinkooda la joojiyay ay jiri doonaan hawlgallo gaar ah oo ay sameyn doonaan ciidamada ammaanka, islamarkaana meelo gaar ah ay bartilmaameedku yahay.
Sidoo kale General Mahad C/raxmaan Aadan Taliyaha Ciidamada Booliska ee gobolka Bay ayaa sheegay hawlgal ay sameeyeen inay ku soo qabteen rag lagu tuhmayo qaraxyadii maalintii sabtida ee 13 kii shcabaan ka dhacay magaalada Baydhabo,dadka gacanta lagu dhigayna loo gudbiyay wasaarada amniga ee maamulka Koonfur galbeed.
Magaalada Baydho oo hada amaankeeda si weyn loo adkaynayo sidoo kalena ay weeraro ka dhaceen maalmihii ina dhaafay ayaa waxaa ku sugan musharaxiin fara badan oo doonaya inay bisha danbe u tartamaan xilka madaxweynaha maamulkaasi.
Sidoo kale shalay waxaa deegaanka Daynuunay ee duleedka degmada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo markii hore ku bilowday weerar ay AL-shabaab ku soo qaadeen Fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlada Soomaaliya,madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaana laamaha amaanka ee deegaanadiisa ku amray inay ka madax banaanaadaan arimaha siyaasada ee gobolka ka jira.
DHAGEYSO Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dowlada ugu baaqay inay siyaasad Furfuran la timaado. →